१ मेगाबाइट भनेको के हो? | सबैका लागि उपयोगी जानकारी।
मेगाबिट 1 के छ?
इन्टरनेट गति सामान्य मा मापन गरीन्छ megabits प्रति सेकेन्ड ध्यान दिनुहोस्, मेगाबाइटमा होईन तर मेगाबाइटमा - यी दुई फरक चीजहरू हुन्।
प्रयोगकर्ताहरूलाई ट्रान्समिट गरिएको वा प्राप्त गरेको जानकारीको यो कल्पना गर्न गाह्रो छ। यो गतिको कल्पना गर्न सजिलो छ मेगाबाइट्स। त्यसो भए, यो मान गणना गर्न तपाईलाई नम्बर चाहिन्छ, हाम्रो केस १ (मेगाबाइट्स) by ले भाग गरी हामी मेगाबाइट्स वा किलोबाइट्स पाउँछौं। यस अवस्थामा, ०.२1। मेगाबाइट वा १२ 8 किलोबाइट बाहिर आउँदछ। कुल इन्टरनेट गति मा १ मेगाबाइट / सेकेन्ड बराबर १२ kil किलोबाइट / सेकेन्ड.
यदि तपाइँ वरिपरि हुनुहुन्छ र हामीलाई यो कसरी सजिलो हुन्छ भन्न सक्नुहुन्छ, तब एक मेगाबाइट बराबर = एक हजार चौबीस किलोबाइट। साथै - यो आधिकारिक जानकारी हो। र बिट्समा बोल्दै, एक megabit यसको रचनामा लगभग १,०1048576,,XNUMXbबिट्स छ।
एक मेगाबाइट डिजिटल सूचनाको मापनको एकाई हो र एक मेगाबाइट एक हजार किलोबिट वा एक सय पच्चीस किलोबाइट बराबर हो। अर्को मेगाबाइटमा ०.००१ गिगाबाइट वा ०००००१0,001 गीगाबाइट हुन्छ। तपाईं विज्ञापन इन्फिनिटममा जान सक्नुहुन्छ, तर तपाईं पढ्न र अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ सम्पूर्ण मेगाबिट के हो बारे जानकारी र यो के बराबर हुन सक्छ - यहाँ उदाहरणका लागि।
सबै भन्दा पहिले, यो तथ्यलाई ध्यान दिएर लायक छ कि मेगाबाइटमा जानकारीको मात्रा मापन गरिएको छ। त्यसो भए केवल एक मेगाबाइटको सम्बन्धमा, यो १०२1024-रीम किलोबिट बराबर हुन्छ। ठिक छ, यदि तपाईं बिट्समा अनुवाद गर्न चाहानुहुन्छ भने, तब यो जान्नुहोस् कि एक किलोबिटमा १०२1024-d बिट्स हुन्छ।
सामान्यतया, १ मेगाबाइट १०1२ किलोबाइट बराबर हुन्छ। तर तपाईंसँग उद्धरण; ईन्टरनेट स्पीडकोट; तपाईसँग के गति छ भन्ने पत्ता लगाउन तपाईले by लाई विभाजन गर्न आवश्यक छ। त्यो हो:
१ मेगाबाइट = १०२1 किलोबाइट्स।
हामी १०२1024 किलोबाइटलाई 8 = बाट विभाजित गर्दछौं र १२ 128 किलोबाइटको गति प्राप्त गर्छौं।
१ मेगाबाइट बराबर १०२1 किलोबाइट हो। १ किलोबाइट १०२1024 बिट्स बराबर छ। र एक मेगाबाइटमा कति बिटहरू पत्ता लगाउनको लागि तपाईंले १०२1 लाई १०२1024 गुणा गर्नुपर्नेछ। तपाईं एकदम प्रभावशाली संख्या १० 1024 get1024 प्राप्त गर्नुहुनेछ (मेगाबाईटमा बिट्स)
एक मेगाबिट १०1024२ किलोबाइट बराबर हुन्छ। वा तपाईं यस डाटालाई बाइट्समा अनुवाद गर्न चाहनुहुन्छ? यदि बाइट्समा, त्यसो भए यो १२128 किलोबाइट हो। यदि तपाईंसँग १ मेगाबाइटको गति छ भने, तपाईं प्रति सेकेन्ड १२1 किलोबाइटभन्दा बढी डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्न। उदाहरण को लागी स्काइप मार्फत संचार गर्न यो पर्याप्त छ।
१ मेगाबाइट १०२1 किलोबिट हो, १ किलोबाइट १०२1024 बिट्स हो। त्यसकारण, कति 1 मेगाबिट तपाईलाई निर्धारित गर्न 1024 गुणा 1 गुणा गर्न आवश्यक छ। १०1024 बिट्स पाउनुहोस्।
मेगाबिट हो जानकारीको एकाई (मुख्य रूपमा डिजिटल जानकारी प्रसारणको टेक्निकल माध्यममा), जुन संक्षिप्त छ एमबीपीएस। यदि यो बारेमा छ प्रति सेकेन्ड मेगाबाइट्स(एमबीपीएस), तब यसको मतलब डेटा स्थानान्तरण दर हो। मेगाबाइट्स र मेगाबाइटहरू भ्रमित नगर्नुहोस् किनभने मेगाबाइट्स यो फाईलहरूको लागि नाप्ने इकाई हो (फाइल प्रणालीमा) वा, अर्को शब्दहरूमा,
१ मेगाबाइट यसलाई १e + bit बिट
१ मेगाबाइट यसलाई १००० किलोबिट
१ मेगाबाइट यसलाई ०.००१ गिगाबिट
१ मेगाबाइट यसलाई 1e-6 terabit
१ मेगाबाइट यसलाई By बाइट्स
१ मेगाबाइट यसलाई १२ kil किलोबाइट्स
१ मेगाबाइट यसलाई ०.२0,125। मेगाबाइट्स
१ मेगाबाइट यसलाई 0,000125 गीगाबाइट्स
ट्यागमा हेर्नुभयो, उद्धरण; गति, इन्टरनेट स्पीडकोट;
त्यसोभए प्रश्न हो, सायद उद्धरणको बारेमा; मेगाबाइट्स प्रति सेकेन्ड; र यसको मतलब यो हो कि प्रति सेकेन्ड तपाईंको कनेक्शनले तपाईंलाई डिफ्लेट गर्न अनुमति दिनेछ कुनै होईन 128 किलोबाइट्स।
कम्प्यूटर विज्ञान मा एक स्कूल कोर्स सम्झनुहोस्। त्यसो भए, एक मेगाबाइट ठ्याक्कै १०२1024 किलोबिट हुनेछ। र पहिले नै एक किलोबिट पूर्ण १०२1024 बिट्स बराबर छ। तपाईको इन्टर्नेटको गति निर्धारण गर्न तपाईले किलोबाइटलाई 8 मा विभाजन गर्न आवश्यक छ, त्यो हो:
१०२1024// = १२8 किलोबाइट्स।
हामीलाई यो स्कूलको डेस्कबाट थाहा छ, कम्प्युटर विज्ञान र कम्प्युटर टेक्नोलोजीको आधारभूतहरू - १ मेगाबाइट १०२1 किलोबाइट बराबर छ। मेगाबाइट्स सूचना को मात्रा मापन, तर यदि megabits / प्रति सेकेन्ड - यो जानकारी स्थानान्तरण को गति को बारे मा छ।